१३ बर्षको केटा र १५ बर्षको केटी विश्वकै कान्छो आमाबाबु ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
१३ बर्षको केटा र १५ बर्षको केटी विश्वकै कान्छो आमाबाबु !
यो कुनै भ्रामक प्रचार हैन यो सत्य घटना हो ! तपाई १३-१४ बर्षको उमेरमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो ? पक्कैपनि तपाई साना साना भुरा भुरी संग खेल्नमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला ! तर हेर्नुहोस् त विश्वमा के हुँदै छ आजभोली !
माथि हेर्नुभएको फोटोमा भएको केटाले आफ्नो भाइ अथवा बहिनीलाई उचालेको हैन त्यो बाबुको आफ्नै बाबु हो ! यी धन्न १३ बर्ष पुगेका केटा आफुपनि बुबा बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन् l अल्फी नाम गरेका यी व्यक्ति १३ बर्षको उमेरमै बुवा बनेर संसारलाइ चकित तुल्याएका छन् ! उनले आफ्नो सन्तानको नाम मैजी राखेका छन् !
एकजना व्यक्तिलाई अल्फीलाइ सोधेको थिए तिमि यति सानै उमेरमा बच्चा त पायौ तर आर्थिक रुपले कसरि हेरविचार गर्छौ ? उत्तरमा उनले भनेका थिए यो आर्थिक भनेको के हो ? अब त तपाई पनि बुझ्नु भयो होला यी बाबुले ब्यबहारीक रुपले आफुलाई कत्तिको परिपक्को बनाएको रहेछन त ! हजुर हरुलाई सुझाव: तपाई आफ्नो सन्तान तपाई परिपक्को भए पछी मात्र जन्माउनु होला ! कम्सैकम २१ बर्ष पुरा गरेपछि मात्र बच्चा जन्माउनु होला त्यसले गर्दा तपाइँले तपाईले आफ्नो सन्तानलाई आर्थिक रुपले राम्रो संग हेरचाह गर्न सक्नु हुने छ !
यदि तपाई पनि अचम्मित हुनु भएको छ भने आफ्नो फेसबुक वालमा सेयर गरेर अरुलाई पनि अचम्मित तुल्याउनुहोस !